Voahangy Info. About. What's This?
Ny Voahangy Lafo Vidy dia iray aminny boky masinny Fiangonani Jesoa Kristy ho anny Olomasinny Adro Farany manampy ny Baiboly sy ny Bokini Môrmôna ary ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana. Nivoaka taminny taona 1851 ny fanontana voalohany sady ahitana lahatsoratra voarakitra ankehitriny ao aminny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana. Atao hoe Pearl of Great Price izy aminny teny anglisy. Ny fanontana nanomboka taminny taona 1902 dia ahitana fizaràna dimy: ampahan-dahatsoratra avy ao aminny tantaranny Fiangonani Jesoa Kristy ho anny Olomasinny Andro Farany nosoratani Joseph Smith taminn ...
Misy efatra ny boky heverinny Olomasinny Andro Farany ho Soratra Masina, sady inoanny mpikambana ao fa vokatry ny tsindrimandry avy amin Andriamanitra, dia ny Baiboly, ny Bokini Môrmôna, ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana ; ary ny Voahangy Lafo Vidy. Ekeny ho isanny Soratra Masina ireo boky telo farany ireo, izay anny Olomasinny Andro Farany manokana, noho izy ireo mino ny fitohizanny fanambaràn Andriamanitra.
Ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana dia iray aminny boky masinny Fiangonani Jesoa Kristy ho anny Olomasinny Adro Farany manampy ny Baiboly sy ny Bokini Môrmôna ary ny Voahangy Lafo Vidy. Atao hoe Doctrine and Covenants izy aminny teny anglisy. Aminireo Olomasinny Andro Farany dia fanangonana fanambaràna vokatry ny tsindrimandry avy aminAndriamanitra io boky io izay natao hametrahana sy hitantanana ny FanjakanAndriamanitra ety an-tany aminny Andro Farany. Araka ny fampianarana dia azo taminny alalani Joseph Smith, mpaminany sy filoha voalohanny Olomasinny Andro Farany, ny ankabeazanire ...
Ny Bokini Môrmôna dia iray amin ny boky masin ny Fiangonan i Jesoa Kristy ho an ny Olomasin ny Andro Farany manampy ny Baiboly sy boky hafa koa izay voasoratra, araka ny fitantaràn i Joseph Smith, tamin ny fiteny ejiptiana tamin ny takela-bolamena hitan i Joseph Smith teny amin ny havoan i Cumorah, ao amin ny Fanjakan i New York any Etazonia, araka ny tari-dalana nomen ny anjely Môrônia tamin ny 21 Septambra 1823. Araka ny fitantaràn i Joseph Smith dia avy amin ny anaran i Môrmôna, mpaminany niaina tamin ny taonjato fahefatra teo amin ny kontinenta amerikana, ny anaran io boky io. Misy fiz ...
RAZAFINDRAZAKA Voahangiharisoa no tena anarany. Renim-pianankaviana. Manan-janaka telo lahy izay samy efa raim-pianankaviana daholo. Efatra mianadahy no zafikeliny aminizao fotoana izao, dia i Mandresy 7 taona - Mendrika 5 taona - Ny Tsiky 3 taona - Iharena 2 volana sy tapany.
Mpanankato teraka sy lehibe tao anatinny zava-kanto i Voahangy na avy aminny lafin-drainy na avy aminny lafin-dreniny satria samy hita tao aminny fianankaviany daholo na ny mpitendry zava-maneno sy ny mpamorona, na ny mpilalao teatra na mpihira.
1. Voahangy - Mpihira
Noho ny tontolo nisy azy dia mbola tanora dia tanora i Voahangy dia efa tia nihira sy nihira. Vao dimy taona izy dia efa mpiakatra mihira eo ambony seza aminny lanonam-pianankaviana. Rehefa nihalehibe izy dia tany aminny Skoto indray, fa Skoto moa izy fony kely ary "Cheftaine" taty aoriana, no nampiasany ny talentany nanafana afon-dasy na colonies de vacances.
Nanangana orchestre mpanafana lanonana izy, niaraka taminireo anadahiny izay samy mpitendry zava-meneno avokoa. Taminizany no nahafantarani Raindimby azy. Taminny taona 1981/1982 no nivoaka ny hira "Raiso ny Tanako Aloha", noforonini Raindimby, izay isanny tena nahafantaranny Malagasy ani Voahangy. Misy mpanankato Malagasy hafa moa namorona hira ho azy koa, ka rehefa manao fampisehoana izy sy Raindimby dia naseho koa ny hira hahafantarana ani Voahangy manokana Solo. Efa niaraka niasa taminy taminny seahtry ny kanto koa ohatra i Henri Ratsimbazafy, Clo Mahajanga, Declare Black Jacks izay namorona any aminny antsasaky ny hira hiraini Voahangy. Taty aoriana koa i Tonton Pa.
Tsy nihanona fotsiny taminny fihirana nefa i Voahangy na dia teo aza ny fiaraha-miasa taminireo mpamorona samihafa. Nanandrana namorona hira koa izy, ka isanny hira noforoniny manokana ny "Fiainana Izany", "Ady ny Fiainana", "Manina anareo", "Tsiaro Anao", sns. Vao maika nandrisika azy taminny famoronana koa ny fankafizanny mpihaino ireny hira ireny.
Ny hira milaza ny "lafiny maharary" eo aminny fiainana no tena hahafantaranny olona ani Voahangy, ary matetika voasokajy ho mpihira be alahelo izy. Isanny tena mampiavaka ani Voahangy koa ny filazana ny zava-misy eo aminny fiainanny Malagasy andavanandro. Tsy dia mankafy tononkira maivamaivana koa izy araka izany.
Taminny 2006 izy no nahazo ny loka aminny hira malagasy taminny nihirany ilay "Tora-bato" miverina, hira noforonini Clo Mahajanga.
Taminity taona 2007 ity i Voahangy dia nahazo ny mari-boninahitra Officier de lOrdre National Malgache. Nankalazaina taminity taona ity koa ny faha-25 taona nihirany. "Voahangy - Gasigasy Accoustik" no vokatra farany navoakany. Tena mampiseho ny mahaMalagasy satria arahinny valiha marovany, korintsana, conga, ary jejy lava izy io.
"Ny faniriako dia hiaraka hifampitantana aminireo mpankafy Voahangy izay teo foana hatraminizay ka hatraminizao" Voahangy.
2. Vokatra Efa Nivoaka
- Volume 8 - Clips Special Slow: Misy hira 12.
- Volume 6 - Efa tsy nofy intsony: Misy hira 10.
- Volume 4 - Ny Havako: Misy hira 12.
- Volume 3 - Antitra Izy: Misy hira 12.
- Volume 2: Misy hira 10.
- Volume 1: Misy hira 10.
Ny Bokini Mosesy dia boky kanônikanny Fiangonani Jesoa Kristy ho anny Olomasinny Andro Farany, izay tafiditra ao aminny boky antsoina hoe Voahangy Lafo Vidy. Ao no ahitana ilay dikan-teny lazaina hoe "voatsindrimandry" anireo toko fito voalohanny Bokinny Genesisy nataoni Joseph Smith.